Serivisy fanariana fasika - Mpanamboatra fantsom-pasika manokana any Shina - Casting Minghe
Inona no atao hoe fanariana fasika
Ny fanariana fasika dia entina ilazana fomba fanariana izay amboarina amin'ny lasitra fasika. Ny vy, vy ary ny ankamaroan'ny fanodinana firaka tsy ferrous dia azo alaina amin'ny fomba fanariana fasika. Satria ny fitaovana maodely ampiasaina amin'ny fanariana fasika dia mora sy mora azo, ary ny bobongolo dia mora amboarina, afaka mifanaraka amin'ny famokarana tokana, ny famokarana batch ary ny famokarana betsaka ny casting. Nandritra ny fotoana elaela, io no dingana fototra amin'ny famokarana famokarana.
Ny akora fototra amin'ny fanamboarana lasitra fasika dia fasika sandry sy fantsom-pasika. Ny fasika am-pandrefesana be mpampiasa indrindra dia fasika siliceous. Rehefa tsy mahafeno ny fepetra takiana amin'ny fampiasana ny fasika silika avo lenta, dia ampiasaina ny fasika manokana toy ny fasika zircon, fasika chromite, ary fasika corundum. Mba hahatonga ny lasitra fasika vita sy ny fotony hanana tanjaka iray ary tsy ho simba na simba mandritra ny fikirakirana, ny famolavolana ary ny fandrarahana vy metaly, dia ilaina matetika ny manampy binder fasika ao anaty fanariana hamehezana ireo fasika fotsifotsy hamorona fasika. Ny mpamatotra fasika amboarina be mpampiasa indrindra dia ny tanimanga, ary ny menaka fanamainana isan-karazany na ny menaka semi-fanamainana, ny silicate mety levona amin'ny rano na ny phosfat ary ny resins synthetic isan-karazany dia azo ampiasaina ho mpamatsy fasika mamolavola. Ny lasitra fasika ivelany ampiasaina amin'ny fanariana fasika dia mizara ho karazany telo: fasika maitso tanimanga, fasika maina tanimanga ary fasika manamafy simika araky ny binder ampiasaina amin'ny fasika sy ny fomba fanorenany ny heriny.
Ny tanimanga sy rano iray sahaza azy no ampiasaina amin'ny famafazana fasika. Rehefa vita ny fasika dia atambatra mivantana ary araraka anaty tany lena. Ny fanariana lena dia manana tantara lava ary be mpampiasa. Ny tanjaky ny fasika maitso dia miankina amin'ny slurry tanimanga namboarina tamin'ny fampifangaroana ny tanimanga sy ny rano amin'ny ampahany iray. Raha vao afangaro ny fasika mamolavola dia manana tanjaka iray izy. Rehefa avy nokapohina tamin'ny lasitra fasika dia afaka mameno ny fepetra takiana amin'ny famolavolana sy ny fandrarahana. Noho izany, ny habetsaky ny tanimanga sy ny hamandoana ao anaty fasika mamolavola dia tena zava-dehibe amin'ny fizotrany.
Fomba fanariana izay amboarina ny fasika sy ny fasika fototra ho famolavolana bobongolo, ary metaly feno rano no feno ny bobongolo ao ambanin'ny hery misintona mba hamokarana fanariana. Ny vy, vy ary ny ankamaroan'ny fanodinana firaka tsy ferrous dia azo alaina amin'ny fomba fanariana fasika. Satria ny fitaovana famolavolana ampiasaina amin'ny fanariana fasika dia mora sy mora azo, ary ny bobongolo dia mora amboarina, afaka mifanaraka amin'ny famokarana tokana, ny famokarana batch ary ny famokarana betsaka ny casting. Nandritra ny fotoana elaela, io no dingana fototra amin'ny famokarana famokarana.
Ny bobongolo ampiasaina amin'ny fanariana fasika dia mazàna dia atambatra amin'ny bobongolo fasika ivelany sy ny fotony. Mba hanatsarana ny kalitaon'ny casting, ny lokon'ny loko dia apetaka amin'ny tampon'ny volom-pasika sy ny fotony. Ny singa lehibe amin'ny fonosana dia ny vovoka vita amin'ny vovoka sy ny fatorana miaraka amin'ny hafanana avo lenta ary ny fitoniana simika tsara amin'ny mari-pana ambony. Ankoatr'izay, ampiana mpitatitra (rano na solvents hafa) sy additives isan-karazany ho mora ampiasaina.
Ny tombony azo amin'ny fanariana fasika maitso tanimanga dia:
- Clay manan-karena amin'ny loharanon-karena ary ambany ny vidiny.
- Ny ankamaroan'ny fasika mando tanimanga efa azo ampiasaina dia azo averina ampiasaina ary ampiasaina indray aorian'ny fitsaboana fasika mety.
- Fohy ny tsingerin'ny famokarana lasitra ary avo ny fahombiazan'ny asa.
- Ny fasika miolakolaka mifangaro dia azo ampiasaina mandritra ny fotoana maharitra.
- Rehefa avy nokapohina ny bobongolo fasika dia mbola mahazaka deformasiona kely ihany nefa tsy simba, izay tena mahasoa ny famolavolana sy ny fametrahana azy io.
Ny fahalemena dia:
- Mba hametahana ny slurry tanimanga viscous eo ambonin'ny vatan'ny fasika mandritra ny fangaro amin'ny fasika dia ilaina ny fitaovana fampifangaroana fasika mahery miaraka amina hetsika fametahana, raha tsy izany tsy azo atao ny mahazo fasika tsara kalitao.
- Koa satria ny fasika amboarina dia manana tanjaka lehibe tokoa aorian'ny fifangaroana, ny fasika mandroritra dia tsy mora mikoriana mandritra ny fanaovana modely ary sarotra ny mikapoka. Izy io dia miasa ary mitaky fahaiza-manao sasany rehefa maodely amin'ny tanana, ary sarotra sy goavambe ny fitaovana rehefa maodely amin'ny milina.
- Ny hamafin'ny lasitra dia tsy avo, ary ny refin'ny refin'ny refy dia ratsy.
- Ny fitorahana dia mora tratran'ny kilema toy ny fanasana fasika, fampidirana fasika ary ny mason-koditra.
Ny lasitra fasika maina tanimanga dia misy atiny mando somary avo kokoa noho ny ampiasaina amin'ny famokarana io fasika io.
Ny vovo-tanety tanimanga dia fotony tsotra vita amin'ny fasika tanimanga.
Fasika tanimanga maina
Ny hamandoana mando amin'ny fasika mamolavola ampiasaina hanamboarana io bobongolo fasika io dia somary avo kokoa noho ny fasika mamolavola lena. Rehefa vita ny bobongolo fasika dia tokony hosaronina loko tsy miova ny tampon'ilay lavaka, ary avy eo apetraka ao anaty lafaoro mba ho maina, ary rehefa avy nangatsiaka izy dia azo ahodina sy araraka. Elaela vao maina ny bobongolo fasika tanimanga, mandany solika betsaka, ary ny bobongolo fasika dia mora simba mandritra ny fanamainana, izay misy fiatraikany amin'ny maha marina ny fanariana azy. Ny bobongolo fasika maina tanimanga dia matetika ampiasaina hanamboarana vy ary fanariana vy lehibe kokoa. Hatramin'ny naneken'ny besinimaro ny fasika nohamafisin'ny simika, dia nesorina ireo karazam-pasika maina.
Fasika mafy fo
Ny fasika amboarina ampiasaina amin'ity karazam-pasika ity dia antsoina hoe famafazana voa mafy simika. Amin'ny ankapobeny ny binder dia singa iray afaka mamolavola molekiola ary manjary lasa rafitra telo-refy eo ambanin'ny asan'ny mpanamafy, ary resina syntetika sy vera misy rano matetika no ampiasaina. Misy fomba 3 fanamafisana simika amin'ny ankapobeny.
- Fanamafisana tena: Ny binder sy ny hardener dia samy ampiana mandritra ny fangaro amin'ny fasika. Rehefa vita ny bobongolo na ny fotony, dia mihetsika eo ambanin'ny asan'ny mpikatroka ny mpamatotra ka mahatonga ny lasitra fasika na ny fotony hanamafy azy irery. Ny fomba fanamafisana ny tena dia ampiasaina amin'ny maodely, fa io koa dia ampiasaina hanamboarana cores na cores lehibe kokoa miaraka amina famokarana kely.
- Fanamafisana Aerosol: Manampia binder sy additives fanampiny manampy rehefa mampifangaro fasika, tsy asiana hardener aloha. Aorian'ny fanaovana maodely na fanamboarana ny fotony dia atsofohy amin'ny vy mahery vaika na fanamafisam-peo misy atody ao anaty fitaterana gazy hanaparitahana azy ao anaty lasim-pasika na ao anatiny mba hanamafisana ny bobongolo fasika. Ny fomba fanamafisana ny aerosol dia ampiasaina indrindra hanaovana cores, ary indraindray ampiasaina hanaovana lasitra fasika kely.
- Fanamafisana ny fanafanana: Ampiana binder sy mpandraharaha mihamafy tsy miasa amin'ny hafanan'ny efitrano rehefa mifangaro fasika. Rehefa vita ny bobongolo na ny fotony dia hafanaina. Amin'izao fotoana izao, ny henjana henjana dia mihetsika miaraka amina singa sasantsasany ao anaty binder mba hiteraka mpikatroka mahomby izay afaka manamafy ny fatorana, ka hanamafisana ny lasitra fasika na fotony. Ny fomba fanamafisana ny fanamafisana dia ampiasaina amin'ny fanaovana cores ho fanampin'ny fanamboarana bobongolo fasika manify kely.
Ny tantaran'ny atrikasa fanariana fasika Minghe
Nanampiana atrikasa fanariana fasika Minghe tamin'ny 2005 miaraka amina fangaro mixer fasika mitohy amoron-dranomasina. Ny fanariana fasika dia fiderana lehibe ho an'ny Rubber Plaster Mould, dingana niorenan'ny orinasa. Ny fanariana fasika amin'izao fotoana izao dia mahatratra ny antsasaky ny orinasan'ny fananganana vy.
In 2016, Minghe Casting dia nanitatra be indrindra ny tsipika fanariana fasika niaraka tamin'ny fanampiana mpangaro fasika mitohy lehibe kokoa miaraka amina hopper roa, fanaraha-maso mandeha ho azy ary famerenana mekanika. Io dia mamela ny Minghe Casting hifindra amin'ny habetsaky ny kalitao avo lenta fotsiny mankany amin'ny isan'ny famokarana, nefa mbola mitazona ny kalitao avo takin'ny tsena ihany. Ny fampiasam-bola dia maneho ihany koa ny fanoloran-tena ho an'ny Prototype Casting hampihena ny dian-tongony amin'ny fanjifana harena voajanahary, indrindra ny fasika silica ampiasaina amin'ny fanariana fasika. Noho ny tsena ambaratonga faharoa ho an'ny fasika haverina, ary ny fahafaha-mampiasa indray ny 80% ny fasika mandritra ny fotoana anaovana azy, dia hofoanana tanteraka ny fako amin'ny fako hatrany !!!
Ny atrikasa fanariana fasika Minghe dia manodidina ny 8000 metatra toradroa. Na inona na inona kely na lehibe ny tetikasa fanariana anao dia afaka manome fotoana fitarihana sy kalitao tsara izahay. Ao amin'ny orinasa mpanamboatra vy, maherin'ny 60% ny ampahany amin'ny alim-bary alefa any ivelany. Noho izany manana traikefa be ho an'ny tetikasanao izahay.
Soa azo avy amin'ny fizotran'ny fanariana fasika
Ny fampiasa amin'ny famatsiam-bola dia azo fintina toy izao:
- Ny ampahany maharitra amin'ny crusher fanariana fasika dia tena fahita any Shina, toy ny takelaka misy valanoranom-borona, palma chromium avo, rindrina manorotoro, rindrina mihosin-potaka sns ... satria ao amin'ny fitaovana fanosehana, toy ny fanariana tsy mahazaka akanjo lehibe , Raha miresaka somary mifandraika dia tsy dia avo loatra ny marina. Indrindra ho an'ny valanoranony, ny vokatra vita dia saika tsy nolefesin'ny lathe. Ny rindrina tapaka, ny rindrina mihosin-drora, ny hoditra mihodina ary ny toy izany ihany no mila nohosorana nohosorana, ka mety indrindra amin'ny fanariana fasika. Satria ny ampahany tsy mahazaka ny valanoranon'ny fanariana fasika, tantanana chromium avo, rindrina tapaka, rindrim-bilona mihodina, hoditr'olom-borona, sns., Ireo fitaovana fanamontsanana ireo dia maharitra 20% mahery noho ny vokatra hafa toy ny fanary foam very.
- Ny fanariana fasika dia karazana fizotran'ny fanariana. Ny lasitra fanariana ampiasaina amin'ny fanariana fasika dia mazàna amin'ny bobongolo fasika ivelany sy ny fotony. Satria ny fitaovana famolavolana ampiasaina amin'ny fanariana fasika dia mora sy mora azo, ary ny bobongolo dia mora amboarina, afaka mifanaraka amin'ny famokarana tokana, ny famokarana batch ary ny famokarana betsaka ny casting. Nandritra ny fotoana elaela, io no dingana fototra amin'ny famokarana famokarana. Amin'izao fotoana izao, eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena, amin'ny famokarana casting rehetra dia 60 ka hatramin'ny 70% ny casting dia vokarina amin'ny bobongolo fasika, ary manodidina ny 70% amin'izy ireo dia novokarina tamin'ny lasitra fasika tanimanga.
- Dingana famokarana tsotra
- Tsingerin'ny famokarana fohy
- Noho izany, ny casting toy ny bolongan-tsoleta misy motera maotera, lohan'ny varingarina, crankshafts sns dia vokarin'ny fizotran'ny fasika maintso tanimanga avokoa. Rehefa tsy mahafeno ny fepetra takiana ny karazana lena, dia ampiasao ny karazana fasika maina ambonin'ny tany, ny karazana fasika maina na ny karazana fasika hafa. Ny lanjan'ireo fanariana vita avy amin'ny fasika maitso tanimanga dia mety manomboka amin'ny kilao vitsivitsy ka hatramin'ny kilaometatra am-polony, raha ny fandefasana azy amin'ny tanimanga maina dia mety milanja taonina maro.
Ireto misy dingana manaraka: ny dingana fototra amin'ny dingan'ny fanariana fasika Minghe Casting:
Dingana fampifangaroana fasika: Manomana fasika amboarina sy fasika fototra ho an'ny maodely, amin'ny ankapobeny mampiasa mixer fasika hametrahana ao anaty sari-tany taloha sy tanimanga mety hifangaro.
Dingana fanaovana bobongolo: Manaova bobongolo sy boaty lehibe arakaraka ny sary an'ireo faritra. Amin'ny ankapobeny, ny singa tokana dia azo atao amin'ny bobongolo hazo, ny famokarana betsaka dia azo ampiasaina hanamboarana lasitra plastika na bobongolo vy (fantatra amin'ny anarana hoe lasitra vy na bobongolo vy), ary ny fanariana be dia be azo ampiasaina hanamboarana takelaka. Ankehitriny ny lasitra dia milina fanaovana sokitra, amin'ny ankapobeny, ny fihodinan'ny famokarana nohafohezina, ary matetika dia maharitra 2 ka hatramin'ny 10 andro vao vita ny bobongolo.
Dingana fanaovana modely (fanaovana Core): ao anatin'izany ny maodely (mamorona ny lavaky ny fanariana miaraka amin'ny fasika amam-bika), ny fanaovana ny fotony (mamorona endrika anatiny amin'ny fanariana), ary ny fampifangaroana ny bobongolo (mametraka ny fotony ao anaty lavaka, ary manidy ny fonosana ambony sy ambany). Ny modely dia rohy manan-danja amin'ny casting.
Dingana mitsonika: Araka ny fitambarana metaly takiana, ny firafitry ny simika dia mifanaraka, ary ny lafaoro fandrendrika sahaza azy no voafantina handrendrika ny firafitry ny metaly hamorona ranon-dronono vita amin'ny rano (ao anatin'izany ny fikajiana sy ny mari-pana mahafeno fepetra). Mampiasa cupola na fatana elektrika matetika ny smelting (noho ny fepetra fiarovana ny tontolo iainana, dia voarara ny cupola ankehitriny, ary ny fatana elektrika no ampiasaina amin'ny ankapobeny).
Dingana mandraraka: Mampiasaha ladle handraraka ny vy anidina ao anaty lafaoro elektrika ao anaty lasitra vita. Ilaina ny mitandrina ny hafainganam-pandehan'ny fandrarahana vy anidina, ka ny vy anidina no mameno ny lavaka iray manontolo. Ankoatr'izay, mampidi-doza kokoa ny fandrarahana vy anidina, koa tandremo ny fiarovana!
Dingana fanadiovana: Rehefa avy nandraraka sy niandry ny vy nohomboana dia makà marotoa hanala ny vavahady ary hanozongozona ny fasika fanariana, ary avy eo ampiasao milina sandblasting ho an'ny sandblasting, mba ho hadio be ny fisehon'ny casting! Ho an'ny casting izay tsy takiana mafy aorian'ny fisavana, dia vonona handao ny orinasa izy io amin'ny ankapobeny.
Fanodinana Casting: Ho an'ny casting sasany misy fepetra takiana manokana na casting sasany izay tsy mahafeno ny fepetra takiana dia mety ilaina ny fanodinana tsotra. Amin'ny ankapobeny, kodiarana fanaovana grinding na grinder no ampiasaina amin'ny fanodinana sy ny famolahana mba hanala ireo burrs sy hampandeha tsara ny fitetezana azy.
Fanaraha-maso Casting: Ny fanaraha-maso ny fandavana dia matetika amin'ny dingan'ny fanadiovana na fanodinana, ary matetika no tsy fantatra ireo izay tsy mahay. Na izany aza, misy ny casting sasany dia mitaky ny fepetra takian'ny tsirairay ary mila hojerena indray. Ohatra, ny casting sasany dia mitaky hazo 5 cm hampidirina ao anaty lavaka afovoany, ka mila maka zoro 5 sm ianao ary andramo.
Aorian'ireo dingana 8 etsy ambony, dia miforona amin'ny ankapobeny ny casting. Ho an'ny casting izay mitaky fametrahana mazava tsara dia ilaina ny milina.
Famolavolana sy famolavolana bobongolo ▶
Dingana Mxing Sand ▶
Fanaraha-maso ny savoka very ▶
Hazo Vondrona Savoka▶
Fanamafisana ny fitaratra rano▶
Esory ny fidirana amin'ny vavahady ▶
Casting fametrahana mazava tsara tanteraka▶
Kitapo sy sambo▶
Ny tranga fanadihadiana Minghe momba ny fanariana fasika
Safidio ny mpamatsy fasika faran'izay tsara
Amin'izao fotoana izao, ny ampahany amin'ny Sand Casting dia aondrana any Amerika, Canada, Australia, United Kingdom, Alemana, France, Sout Africa, ary firenena maro hafa manerantany. Izahay dia ISO9001-2015 voasoratra anarana ary voamarin'ny SGS ihany koa.
Ny serivisy fanamboarana Sand Casting mahazatra anay dia manome casting an-dàlana maharitra sy mora vidy izay mifanaraka amin'ny antsipirihanao momba ny fiara, ara-pitsaboana, aerospace, elektronika, sakafo, fananganana, fiarovana, ranomasina, ary indostria maro kokoa. Haingana handefa ny fanontanianao na handefa ny sarinao mba hahazoana teny maimaim-poana amin'ny fotoana fohy indrindra. Mifandraisa aminay na mailaka sales@hmminghe.com hijerena ny fomba ahafahan'ny vahoakanay, ny fitaovana ary ny fampitaovana mitondra kalitao tsara indrindra amin'ny vidiny tsara indrindra ho an'ny tetikasa fanariana fasika anao.